Meizu M5, famakafakana sy hevitra | Androidsis
Alfonso de Frutos | | Meizu, hevitra
Misy ny mpanamboatra toa Meizu izy ireo dia mahavita mahazo sehatra eo amin'ny tsena iray tototry ny an'ny telefaona amin'ny alàlan'ny fanolorana telefaona tena feno amin'ny vidin'ny fandravana.
Efa nandramantsika ny sasany amin'ireo vahaolana arahin'izy ireo, toa ny Meizu M3 Fanamarihana, anjaran'ny tsirairay izao Meizu M5, sehatra fidirana izay mety ho hitanao 150 euro amin'ny Amazon.
2 Toetra ara-teknikan'ny Meizu M5
4 Sarin'ny sary nalaina niaraka tamin'ny Meizu M5
6 Ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
Alohan'ny hanombohako hiresaka momba ny famolavolana, tiako ny hanazava zavatra iray: ny Meizu M5 dia mitovy amin'ny iPhone 5c. Ratsy izany? Tsia, hitako ho toy ny plus ho an'ireo olona mitady vahaolana hafa amin'ny vahaolana Apple izany.
Ny mpanamboatra sinoa dia nisafidy a famolavolana kilasika ho an'ny eo aloha, miaraka amin'ny bokotra tokana eo ambanin'ny efijery izay misy ny sensor sensor amin'ny rantsan-tànana ary koa mivezivezy amin'ny interface amin'ny alàlan'ny fihetsika.
Raha ny resaka fitaovana dia toa tsy misy vera miaro ilay M5, fa izay azoko hamafisina farafaharatsiny Sisiny boribory 2.5D hanome antso tsy azo lavina ho an'ny fitaovana ary hanatsara ny fifandraisana.
Lazao ny telefaona somary mahazo aina sy maivana izy ioMba hananana efijery 5.2-inch dia terminal mora tantanana izy io, ary ny lanjany 138 grama dia mahatonga ny Meizu M5 hilatsaka tsara ao an-tànany.
Ny bokotra sisiny dia manolotra dia tsara, ny tapany aloha dia ampiasaina ho faritra ambaratonga fidirana ary amin'ny ankapobeny dia manaraka izay antenaina amin'ny telefaona izay tsy mahatratra 150 euro.
Toetra ara-teknikan'ny Meizu M5
Operating System Android 6.0 eo ambanin'ny fampiasa mpampiasa Flyme manokana
efijery 5.2 "IPS misy famahana HD
processeur MediaTek MT6750
Tahiry anatiny 16 GB azo ovaina amin'ny alàlan'ny slot karatra fitadidiana
Fakan-tsary aoriana 13 mpx sensor miaraka amin'ny LED Flash
Fakan-tsary aloha 5 Mpx sensor
Conectividad LTE 4 taranaka ho avy - 2-2 Wi-Fi MIMO (antennas 2) ho an'ny fandrakofana tsy misy hafainganam-pandeha haingam-pandeha - Bluetooth - GPS sy aGPS - OTG - Seranana USB Micro
Fitaovana hafa Fitaovana fantsom-tànana
bateria 3070 Mah
lafiny 147.2 x 72.8 x 8 mm
lanja Gramin'ny 138
vidiny 150 euro amin'ny Amazon
Amin'ny lafiny teknika dia miatrika telefaona avo lenta isika. Tsy misy intsony. Ny fanaingoanao anay hamela ny lalao mihetsika na ny fampiharana tsy mila loharano lehibe fa raha mametraka lalao somary manapotipotika isika dia ho afaka hamindra azy ny telefaona, saingy tsy misy fikafika firy. Andeha hotadidintsika fa ity terminal ity dia hanatanteraka tsara ny filan'ireo mpampiasa rehetra izay maniry finday avo lenta hivezivezy amin'ny Internet, tambajotra sosialy ary hanome azy fampiasana tena mahazatra.
Asongadino ny heriny Bateria 3.070 XNUMX mAh. Tamin'ny fitsapana nataoko nandritra ny fotoana nosedraiko ity terminal ity dia afaka nanamarina aho fa tsy misy isalasalana fa ity fizarana ity no tena mahaliana amin'ity Meizu M5 ity.
Naharitra roa andro ny telefaona rehefa nampiasaiko tamin'ny antonony sy tamin'izany andro izay nilaiko nametahana faran'izay betsaka ny M5, tao anatin'ny fahafaha-manao azy, nahatratra iray andro sy tapany no tonga tamiko tsy nisy olana. Mazava ho azy, tsy misy famantarana ny famahanana haingana, na dia manana fahaleovan-tena tsara toy izany aza dia tsy tokony hanahirana an'io lafiny io.
Meizu dia tsy nitaky hiakatra be ny vidiny ao amin'ny M5 vaovao, ka amin'ny faritra sasany dia tonga ny fotoana hanesorana ireo hety, ary ny iray tamin'izy ireo dia ilay efijery. Noho izany dia nanapa-kevitra ny hisafidy a tontonana misy solvent, misy kalitao tsara ary miantoka ny traikefan'ny mpampiasa tsara izany, hisorohana ny vidin-javatra tsy hiditra an-tsehatra.
Ho an'ity, nisafidy tontonana ny mpanamboatra 5.2-inch IPS ary famahana HD720p, miaraka amin'ny 282 teboka isaky ny santimetatra ary misy famaritana tsara sy fotsy avo lenta. Amin'ny ankapobeny, ny loko dia tena voajanahary, fa ny mainty tsy lalina loatra ary indrindra ny famirapiratana, ambany dia ambany amin'ny hevitro, dia mavesatra kely ny traikefan'ny mpampiasa, indrindra amin'ny andro tena manazava.
Tsy azontsika adino ny sensor sensor-ny rantsan-tànany izay manome fahombiazana tsara ho an'ny elanelam-bidin'ity Meizu M5 mihetsika ity. Ny dian-tànana dia matetika no ekena haingana, na dia tsy maintsy milaza aza aho fa mihoatra ny indray mandeha dia voatery nametraka ny rantsan-tànako imbetsaka aho, fa tsy nisy zavatra tsy ananan'ny mahazatra telefaona iray hanombohana amin'ny tontolon'ny Android.
Mazava ho azy, ny interface-ny dia mbola tsy tia na inona na inona. Ary io Flyme OS io dia tsy Android. Ary tsy manakaiky ny zavatra niainan'ny mpampiasa izany. Ok, ny hevitra hampiasa ny sensor ho an'ny capres fa tsy ny bokotra capacitive tiako, fa ny fisian'ny custom custom an'ny mpanamboatra aziatika dia lavitra ny mahazatra antsika dia lohahevitra izay tsy dia tiako loatra. Fa maninona ny fijerena endrika toa iPhone?
Manana zavatra tsara ve i Flyme? Mazava ho azy fa eny ary raha vao zatra izany dia rafitra feno tanteraka miaraka amin'ny antsipiriany tena mahaliana. Fa tsy toa terminal Android izany. Tsotra toy izany.
Farany hiresaka momba ny Fakan-tsary Meizu M5. Hanombohana azy, ny terminal dia manana fakan-tsary eo anoloana 5-megapixel, ankoatry ny fakan-tsary 13-megapixel aoriana.
Asongadino izany ny interface fakan-tsary an'ny Meizu M5 dia manana safidy tsara, ao anatin'izany ny maody matihanina saika ilaina avela hahafahantsika manamboatra fari-pitsipika samy hafa amin'ny terminal toy ny fifandanjana fotsy na ny halaliny.
Mandeha ny telefaona sary mendrika, nefa tsy dia misy fireharehana. Amin'ny tontolo iainana mazava dia afaka maka sary azo ekena isika, miaraka amin'ny loko mazava sy maranitra, na dia tsy manantena kalitao lehibe aza ianao.
Rehefa latsaka ny alina na mampiasa ny fakantsary ao anaty trano dia ho hitanao eo no ho eo fa miseho ilay tabataba atahorana ary ny kalitaon'ny captruas dia mihena be, izay manazava fa ny fakan-tsary Meizu M5 dia tsy ny tanjany matanjaka, lavitra azy. Mazava ho azy fa hanafaka anao amin'ny hafainganam-pandeha mihoatra ny iray io.
Sarin'ny sary nalaina niaraka tamin'ny Meizu M5
Miatrika telefaona miditra izahay izay manome zavatra tena mahaliana, indrindra izany endrika kanto, una fahaleovan-tena tsy misy farany ary a ssensor sensor, zavatra sarotra hita ao anaty laharana fidirana.
Ny fakan-tsary dia tsy ny tsara indrindra eny an-tsena, fa hanafaka anao amin'ny olana be ianao. Ny tena fa? Flyme, fanaingoana iray tena tsy mitovy amin'ny Android Toa miatrika terminal tsy mampiasa ny rafitra fandidiana Google izahay.
Ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
Naoty 3.5 kintana
Famerenana ny: Alfonso de Frutos
Fahaleovan-tena tena tsara
Sarany lafo amin'ny vola
Somary mikimpy ny fakantsary
Manalavitra lavitra ny Android i Flyme
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Meizu » Meizu M5, fanadihadiana sy hevitra
Toy izany koa ny Huawei Nova 2 sy Nova 2 Plus vaovao
OnePlus dia mandefa programa referral mba hahafahanao mitahiry rehefa mividy ny OnePlus 5 ianao